महिलाको यौनिको प्रकार बारे तपाईलाई थाहा छ ? छैन भने अवश्य पढ्नुस « Today Khabar
महिलाको यौनिको प्रकार बारे तपाईलाई थाहा छ ? छैन भने अवश्य पढ्नुस
प्रकाशित १ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १३:३३
साथीहरू, हामी महिला योनी को प्रकार को हुन् भनेर यस लेखमा देखाउने आज । तपाईं अचम्ममा गर्न ज्ञान हो महिला योनी विभिन्न आकार, आकार र रंग जस्तै कि सेक्स। यसको साथ, यो धेरै तरिकामा फरक छ र मानिसहरूको छनौट तिनीहरूको लागि फरक छ। कडमम सूत्रले पनि बताए कि महिलाहरु को जननाथिकता आफ्नो शरीर को संरचना मा आधारित छ। योनी धेरै प्रकार को छ तापनि, तर तपाईं योनी मात्र5प्रकार ती मानिसहरू Btaagen हामी थप मनपराएका छन्।
ओठ योनी मोटे हो: योनी फैटी को ओठ हुँदा यो धेरै नरम छ। अधिकांश मानिसहरू यो योनि जस्तै धेरै छन्। यो मान्छेलाई चुम्बन गर्न राम्ररी महसुस हुन्छ र यो सेक्स गर्न सजिलो छ। यो प्रकारको योनिमा, कपाल सबै मा छैन, वा यो हल्का प्रकाश हो।
थप हड्डी महिला बढी स्लिम हो र ट्रिम कि योनी, यो बढी सम्भावना थप उनको योनी समावेश भएको हड्डी को भाग हो गर्नुपर्छ। यो प्रकारको योनि एकदम संकीर्ण छ। त्यस्ता पुरुष तंग योनी महसुस छ र Cmotkars समयमा तिनीहरूलाई थप सहज जान्छ। यस कारणको लागि, रेजिना जस्ता पुरुषहरू यो मनपर्छ। अत्यधिक मनोरञ्जनको कारण, तिनीहरूसँग जेनेटिकिया भए तापनि उनीहरूको कुनै पनि अपवाद छैन।
विशेषज्ञ योनि: यो प्रकार को योनि बिल्कुल सही छ। यो त सधैं तंग हुन तयार देखिन्छ, त्यसैले मानिसहरूको आकर्षण गुणा बढ्छ। यो प्रकारको योनिको बाह्य रङ्ग पनि एकदम सही छ।
योनिको जस्तै योनि: यो योनिको प्रकार धेरै तंग हो। त्यसोभए यस प्रकारको योनिमा साझेदारले ठूलो आनन्द पाएका छन्। योनि यो देखिन्छ कि यो पूर्ण रूपमा बन्द छ। यसले दुवै साझेदारहरूलाई क्लिमक्स पुग्न सजिलो बनाउँछ र बढी आनन्द उठाउँछ। पुरुषहरू यस प्रकारको योनिमा आकर्षित हुन्छन्, र उनीहरूले मात्र उनीहरूको लागि मात्र हो।
प्हाकू योनि: क्लिटरिस यस प्रकारको योनिमा एकदम बाहिर छ। छुट गरेर महिलाहरु छिट्टै उत्तेजित हुन्छन् र तिनीहरू धेरै आनन्द उठाउँछन्। यो देखेर पुरुषहरूले पनि राम्रो देख्छन्। महिलाहरु लाई हल्का देखि उनलाई पछि पछि उत्साहित हुन्छ, यसैले चोटी सम्म पुगन को लागी कम समय लाग्छ। चोटीमा महिलाहरूलाई पुगेर पुरुषहरूले राहत पाएका थिए किनभने उनीहरूले सोच्दैछन् कि महिलाले के गरिरहेको छ पूर्णतया सन्तुष्ट हुन्छ।
साथीहरू, हामी महिला योनी को प्रकार को हुन् भनेर यस लेखमा देखाउने आज (Mahilaon yoni KITNE prakar राजा hoti हाई राजा)। तपाईं अचम्ममा गर्न ज्ञान हो महिला योनी विभिन्न आकार, आकार र रंग जस्तै कि सेक्स। यसको साथ, यो धेरै तरिकामा फरक छ र मानिसहरूको छनौट तिनीहरूको लागि फरक छ। कडमम सूत्रले पनि बताए कि महिलाहरु को जननाथिकता आफ्नो शरीर को संरचना मा आधारित छ। योनी धेरै प्रकार को छ तापनि, तर तपाईं योनी मात्र5प्रकार ती मानिसहरू Btaagen हामी थप मनपराएका छन्।